Amaqela e-WhatsApp uMurcia. Joyina awona maqela aphambili ama-Murcian】?
Kubemi baseMurcia naseMurcia abajongileyo amaqela e-whatsapp kwabo bajoyinayo, ke unayo amaqela aWhatsApp abalaseleyo eMurcia.
1 Amaqela e-WhatsApp Murcia
2 Amakhonkco eqela le-WhatsApp Murcia
3 Amaqela e-WhatsApp Murcia
3.2 Uncedo lwam
3.3 Pokemon Yiya Murcia
3.4 Imisebenzi Cartagena Murcia
3.5 Umdlalo webhola ekhatywayo eMurcia
3.8 Ukulunga kukaMurcia
3.9 I-Murcia Tennis
3.10 Iimbongi ezivela kumazantsi mpuma eSpain
3.11 Inkcubeko eMurcia
4 Nyusa amaqela e-WhatsApp Murcia
5 Yenza iqela i-whatsapp Murcia
En gromania.neAsithandi ukuthumela amaqela aWhatsapp aphambili kwaye kule posi sifuna ukudwelisa amaqela eWhatsApp emixholo eyahlukeneyo kodwa ngento enifana ngayo, angamaqela e-WhatsApp abantu baseMurcia.
Ngoku khetha amaqela e-WhatsApp Murcia anomdla kakhulu, ujoyine nawo ukuqala ukudibana nabantu.
Enye inketho elungileyo ukuba uyi-Murcia kukwenza iqela lakho le-WhatsApp. Ukuba uyayenza, ungabelana ngayo ukuze kongezwe abasebenzisi abatsha ucofa apha.
Amakhonkco eqela le-WhatsApp Murcia
Inkcazelo: Iqela ukwenza hangouts phakathi kwabantu abatsha.
Inkcazo: Senze iqela le-whatsapp ukuba sincedane kwezi ntlobo zeengxaki, nokuba kukudakumba, unxunguphalo, unkqonkqozo, tlp, ithegi, yonke into, liqela lokuzinceda, ukunceda nokuncedwa ngamava ethu.
Pokemon Yiya Murcia
Inkcazo: Iqela elizinikezelwe kumdlalo we Pokemon Go ingakumbi evela kwiziko laseMurcia kunye neendawo eziyingqongileyo akunandaba namava, inqanaba okanye iqela olapha ulamkelekile, eli qela lenziwa ukuba lidlale kunye ukwenza uhlaselo, utshintshiselana ngeembemem nayo yonke into enxulumene Pokemon Yiya
Imisebenzi Cartagena Murcia
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp ingqesho uCartagena Murcia.
Umdlalo webhola ekhatywayo eMurcia
Inkcazelo: Iqela apho sifuna khona abantu ukuba badlale ibhola okanye uloliwe eMurcia.
Inkcazelo: Abantu abasuka eMurcia banomdla kuqeqesho nasekuziqhelaniseni neWrestling.
Ingcaciso: Iqela le-WhatsApp kwii-hangouts, yiMurcia kuphela.
Ingcaciso: Ukukhula kokomoya kobuqu, iqela ukubalisa amava, ukuhlala kunye nokuvela njengabantu.
Iimbongi ezivela kumazantsi mpuma eSpain
Inkcazelo: Iprojekthi yokudala ingqokelela yeembongi ezivela kumazantsi mpuma eSpain. UMurcia kunye no-Alicante. Abafazi kunye nabantu, ababhala imibongo okanye abanomdla kwimibongo nakwilizwe labo liphela.
Ingcaciso: Iqela leNkcubeko ye-WhatsApp eMurcia.
Nyusa amaqela e-WhatsApp Murcia
Ukuba uzithandile ezi Amaqela e-WhatsApp aseMurcia, Ndikumema ukuba wabelane ngale posi nabahlobo bakho kwiinethiwekhi zentlalo.
Yenza iqela i-whatsapp Murcia
Ukuba awuyifumani Iqela le-WhatsApp lika-Murcia into obuyikhangela, ukhetho oluhle kukuba uzenzele ngokwakho kwaye wabelane ngalo kwiwebhusayithi yethu ukuze kwandiswe abathathi-nxaxheba abatsha. Unako Yenza iqela le-WhatsApp eMurcia kwaye lipapashe ucofa apha.